Ukuhamba kweminyaka kubahambi ngeenyawo eNew York, ngokutsho komfoti | Izidalwa ezikwi-Intanethi
El Kule minyaka ibonakalisiwe kubomi bethu nakwimizimba yethu ngokwahlukileyo. Abanye bethu babudala bungcono kwaye kweminye imibimbi iyavela ukumakisha elinye ibinzana ebusweni nasemzimbeni. Sisenzo sexesha esiwela emizimbeni yethu kwaye apho sinokwenza okuncinci, ngaphandle kokuzigcina usempilweni kunye nokutya usempilweni.
Ngumfoti waseDenmark UPeter Funch lowo usibonisa kwiifoto zakhe ukuhamba kwexesha, ngokuchanekileyo kwiminyaka eli-9, ukusuka kuthotho lwabemi. Ngelo xesha wachitha u-8: 9 ukuya ku-42: XNUMX kusasa ethatha imifanekiso kwikona esemazantsi yama-XNUMX eNew York.
A Le projekthi ibizwa ngokuba yi "43nd kunye neVanderbilt" ikwakwakweso sinye apho abamba khona umntu ofanayo kabini, nangona ekwahluka ngokobudala okungena kwinxalenye yemfihlakalo. Zama ukusenza sifumanise ukuba ingaba ziintsuku, iinyanga kunye neminyaka.
Into oyifunayo ngumthambo kumbukeli ukuba abone ukuba ngawaphi amalungu omfanekiso ngamnye atshintshileyo kwaye ngawaphi amalungu ahlala efana ngokufanayo. Ngaloo mizuzu ibiwe kubo bantu, UFunch uveza iingcinga zakho, iingxaki zakho kunye nokugcwala kukaThixo.
Kulo nto ulwandle lwabantu oluhamba kwizitrato zedolophu enkulu njengeNew Yorker, wonke umntu uzama ukuba yinxalenye ezimeleyo kwaye azihlukanise nabanye; umzobo ofunyenwe ngulo mfoti.
Fumanisa ukuba banal njani indlela yemihla ngemihla yentsasa kwaye abo bahambi ngenyawo bazinika njani iinkcukacha zobomi babo nangona bezama ukuzifihla. Umboniso kwifoto kaFunch etsala ixesha kuwo ngamnye kubo kunye nendlela iminyaka, hayi yonke, edlula ngayo ngokufanayo.
Okunye umfoti ukulandela kanye njengaleyo sabelana ngayo kwiintsuku ezidlulileyo, nangona wayejonge phambili kula mathala eencwadi ayiliweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Lo mfoti ufota irekhodi lokuhamba kweminyaka kuthotho lwabemi eNew York